क्या बद्नामी भो !!! | Nepalese.org - No. 1 News Portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actoress, Audio, Video, Interview
गएको शनिबार दिउँसो म कास्कीको एउटा गाउँमा हिन्दै थिएँ । हरी रोक्काले फोन गर्नु भो र प्रा. पिताम्बर शर्मा र दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री समेतका साथीहरू मिलेर वाम गठबन्धनका पक्षमा वैचारिक पक्षधरता जाहेर गर्दै एउटा वक्तव्य जारी गर्न लागेका छाै‌ं, तपाईंको नाम समावेश गर्नुपर्यो भनेर सोध्नु भो ।
मैले यत्ति त ठिकै होला, आलोचनात्मक समर्थन गर्दै यो गठबन्धनले चुनाव जितोस् भन्ने मेरो पनि राय हो भनेर वक्तव्यको पाठ नसुनी हुन्छ भनिदिएँ । २ घण्टा पछि नै फोन आउन थाले । वक्तव्यमा मेरो संलग्नता र हस्ताक्षरका बिषयमा सोधिन थाल्यो ।
सोधिएको एउटै बिषय हुन्थ्यो तर बाबुरामलाई खेदेर नारायणकाजीलाई समर्थन गर्नुपर्ने के बाध्यता आइलाग्यो ? अनि पो म आफ्नो हुस्सु पना देखेर झल्यास्स भएँ ।
वक्तव्यको पुरा पाठ अहिलेसम्म पनि मैले पढेको छैन । अरू पक्षबारे पढेपछि नै राम्रो नराम्रो भन्न सकिएला । तर त्यसमा बाबुराम भट्टराईको प्रसंग मिसाएर अप्रत्यक्ष रूपमा नारायणकाजीलाई मत माग्नु सम्पूर्ण बौद्धिकता र आलोचनात्मक चेतको बिरूद्धको कुरो हो, मेरो लागि ।
समग्र वाम गठबन्धनको जीत या भविष्य र त्यसका शक्ति सम्बन्धका लागि बाबुराम न बाधक हुन् न वैचारिक चुनौती नै ! उनले आफूलाई यो कित्ताबाट बाहिर राखेका र सोही अनुरूप आफ्नो शक्ति आर्जन गर्न गरिरहेको प्रयास र व्यक्त विचारले वामपन्थी गठबन्धनलाई प्रभाव पनि पार्दैन ।
नारायणकाजीको व्यक्तिगत जीत र हार मेरो चासोको बिषय पनि होइन ।
मेरो चासो यो वामपन्थी गठबन्धन साँच्चै वामपन्थी बनोस् र शक्ति आर्जन गरोस भन्नेसम्म हो । तर जे जसरी त्यसमा उक्त बिषय प्रवेश गरेको छ म त्यसमा सहमत छैन । त्यो कुरो मलाई पहिलो पटक जानकारी दिने अन्नपूर्ण पोस्टका पत्रकारलाई पनि मैले जानकारी गराएको थिएँ ।
उक्त प्रसङ्ग सामेल भएको थाहा पाएको भए या त त्यसलाई म हटाउन लगाउँथे या आफ्नो नाम हटाउन लगाउँथे । जे भयो त्यसप्रति मलाई खेद छ ।
पछिल्लो साता नयाँ पत्रिकामा नियमित आर्टिकलमार्फत आफ्नो मत राखौंला भन्ने विचार थियो, लगातारका फोन र सामाजिक सञ्जालमा आएका टिप्पणीपछि यो लेख्न बाध्य भएँ ।
त्यो वक्तव्यमा हस्ताक्षर गर्ने अरू मित्रहरूको विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताप्रति मेरो सम्मान छ । बाँकी सन्दर्भ पछिल्लो साता । – साझा पोष्टबाट